इमान्दारीता र स्वाभिमानको ब्यथा अनि कथाहरुको वास्तबिकता | onlineharpal.com
छलकपट र षड्यन्त्रद्वारा दुनियाँको नजरमा देखिने सफलता प्राप्त होला तर इमान्दारिता र सत्यमा अन्तरमनको आत्मसम्मान र सन्तुष्टि भेटिन्छ । हालका दिनहरु परिवर्तित समय सँगै साम्प्रदायीक षड्यन्त्रका प्रायोजनहरु बाक्लीदै गैरहेको छ । लाग्छ इमान्दारीता इतिहास बन्दैछ अनि इमान्दारीताको जीत सपना । नेपालको इतिहासमा पटक पटक इमान्दारीता र स्वाभिमान गिराउने खेलहरु बाक्लै रुपमा हुदै गैरहेको भेटिन्छ ।
इतिहासमा भएका असमान संझौताका कारण कयौ बिरबिरंगानाहरुको स्वाभीमानको आहुती चढाएका छन् । त्यस मध्ये पनि सुगौली सन्धि एउटा यस्तो स्वाभिमानको चिता बनेर रह्यो इतिहास देखी बर्तमान सम्म हजारौ आत्माहरु स्वभिमानको मलामी जान बाध्य छन् ।
इमान्दारीता आफैमा एउटा स्वर्णिम र उच्च स्वभाव हो जसले मनोबैज्ञानिक रुपमै सत्यधारण गरेको हुन्छ र इमान्दारीता र स्वाभिमान बाट प्रेरित आत्मा कहिल्यौ हार्र्दैन तर देशको इतिहास देखी बर्तमानसम्म केलाउदा कयौं पटक स्वाभिमान र इमान्दारीता सड्यन्त्र र कपटको शिकार बनेको भेटिन्छ ।
जब इमान्दारीता र स्वभिमानमा औलाहरु उठ्न थाले अनि उनिहरु बिरुद्ध तात्कालिन समाजले कलंकीत तुल्याएको देखिन्छ । ति बीरहरु हार खाएको उदाहरण इतिहासमा छरपस्ट पढ्न पाइन्छ । म यो आलेखमा ति महापुरुषहरुमा समर्पित गर्न चाहन्छु जसले तत्कालको आफ्नो बाटो पहित्याउन सकेनन् या तत्कालको लागी त्यो स्वभाव नै शहिद बनाइयो तर उनिहरुको इमान्दारीता र स्वाभिमान इतिहासको पानामा गौरव गाथा बनेर अझै जीवीत छ ।
नेपाल एकिकरणको इतिहासमा अगाडी आउने बिर सपुत हुन अमरसिंह थापा । उनी बीर इमान्दार र विस्वासी भएकैले राजा रणबहादुर शाहको पालामा अङ्ग्रेजहरूसँगको युद्धमा सूदुर पश्चिमान्चनको रक्षाको जिम्मा पाएका थिए ।
त्यसताका अमरसिंह थापालाई अङ्ग्रेज तर्फका जनरल अक्टरलोनीले ठुलो प्रलोभन देखाउदा पनि लोभ लालचमा नफसी राष्ट्रिय हितलाई सर्भोपरि ठानी विरता पुर्वक अङ्ग्रेजसँग लडेकाले हामी उनीलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सम्मान गर्दछौं ।
असमान सुगौली सन्धिबाट बिरक्तीएका बिर अमरसिंह थापा जीवनको उत्तरार्धमा गासााइकुण्डमा निर्वास जीवन बिताउन बाध्य पारिए । र उनको मृत्यु पनि उतै हुनगयो । त्यती खेर उनि भित्रको स्वाभिमान र इमान्दारीता देशको दुखाई सँगै सति जान बाध्य भयो, त्यो समयको हार हाम्रो लागी बर्तमान सम्मै दिर्घव्यथा बनेर पटक पटक बल्झि नै रहेको छ ।
आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा थुप्रै सैनिक, कानूनी, सामाजिक तथा आर्थिक सुधारहरू गरेको पाइन्छ । सैनिकलाई युरोपेली शैलीमा आधुनिकिकरण गर्नुका साथै बिभिन्न समाजिक कुरितीहरू हटाउने कार्यलाइ बिषेश महत्व दिएका उनिले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारहरू सँगै नवनिर्माणका धरहरा, सुन्धारा, बागदरवार, टेकु पुल, थापाथली पुल आदि निर्माण गराए।
बिसं १८९४ असार ५ गते भिमसेन थापाबाट फौजी तैनाथी खोसियो भने अर्को महिना उनलाई पदबाट हटाइएको थियो। थापालाई पदच्युत गरिएपछि पाँडे समूहका नाइके रणजंग पाँडेले मुलुकको शासन व्यवस्थामा प्रभाव पार्नलागे । भारदारहरूबीचको गुटवन्दी र दरबारिया षड्यन्त्रमा परेर उनलाई जेलनेलसहित अनेकौ यातना दिई थुनामा राखियो।
वि. सं.१८७१ र ७२ मा अंग्रेजसँगको युद्धमा पराजित र १८७३ मा भएको सुगौली संन्धी पश्चात तथा १८९४ मा राजकुमार देबेन्द्रको हत्याको अभियोग तथा दरवारिया षड्यन्त्रले गर्दा आफ्नो अपमान सहन नसकी यिनले अन्ततः वि.सं. १८९६मा आत्महत्या गरे ।
त्यो सपुत जो आफ्नो जीवनकालको अमुल्य समय राज्यको सेवामा कुर्बान गर्यो उहि आफु माथि भएको लज्जापुर्ण आरोपको लागी जीवन त्याग्न बाध्य भयो । भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको आमा पट्टिको हजुरबुबा थिए । आफ्नो हजुरबुबाको मृत्युको बदला उनले लिएर नेपालमा राणा शासनको सुरूवात गरेको भन्ने पनि भनाइ छ ।
बहुदलिय जनबादका प्रतिपादक मदन भण्डारीलाइ एक लोकप्रीय नेताका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । उनले प्रतिपादन गरेको सो सिद्धान्त कम्युनिष्ट बृत्तमा लोकप्रिय पनि मानिन्छ । आफ्नो छोटो जिवनकालमा आफ्ना धारणबाट जनता प्रभाबीत गर्न सक्ने कला भएका भण्डारी एक कुशल बक्ताका रुपमा चिनिन्छन् ।
बहुदलीय जनवादका ब्याख्याता भण्डारीको २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । सिद्धान्तका निम्ति जीवन होइन, जीवनकालागि सिद्धान्त’ भन्ने धारणा बोकेका भण्डारी सिद्धान्तलाइ ब्यबहारमा जीवीत राख्नु पर्ने धारणाका हिमायती हुन् ।
गान्धीवादी सन्त नेता मानिने भट्टराई दृढ अठोट र संकल्पका धनी व्यक्तित्व मानिन्थे। यिनी स्पष्टवक्ता र सिद्धान्तनिष्ठ नेताका रूपमा चिनिन्थे। हरदम हँसिलो रहने भट्टराईको सेन्स अफ ह्युमर उच्च रहेको थियो।
गम्भीर समस्यालाई हल्का रूपमा लिएर पचाउने क्षमता उनमा थियो, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास छोडेर निस्कँदा यिनी हातमा छाता र कमण्डलु लिएर पैदलै निस्केका थिए। पार्टीको आन्तरिक कलह बढ्दै गएर २०५८ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला उनकै नेतृत्वमा पार्टी विभाजित भएर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका रूपमा अर्को पार्टी गठन भयो।
यसबाट भट्टराई ज्यादै चिन्तित बने। पार्टी विभाजनको त्यस घटनापछि एक प्रकार उनी मौन बसे। २ खेमामा विभाजित नेपाली काँग्रेसलाई एकिकरण गर्ने कार्यमा यिनले ठूलो भूमिका निभाएका थिए। प्छिल्लो जीवनकालमा यी नै इमान्दारीता र स्वच्छ छबीका पछिल्लो समयका राजनैतीक पर्सनालिटी जिवन भरि रगत पशिनाले सिंचित पार्टिबाट बर्हिगमन हुनु पर्यो । जो पछिल्लो समयमा पार्टी प्रती यती उदासिन देखिए की कांग्रेस महाधिबेशनको आतिथ्यता समेत स्विकार गर्न चाहेनन् ।
यी त देखिएका प्रतिनीधी घटना हुन् गगनसिंह हत्या देखि लक्ष्मिप्रसादको राँची यात्रा यही प्रबृत्तीको उपज हो । यस्ता थुप्रै घटनाहरु छन् जसले तत्कालिन समयमा इमान्दारीता र स्वाभिमानलाइ असफल बनाउने प्रयत्नका लागी झुट र कपटलाई रोजेको पाइन्छ । अल्पकालमा सफल मानिएका सड्यन्त्रका ति प्रयासहरु समयसँगै तिरस्कारको शिकार बन्न पुगे । अझै पनि सड्यन्त्रको खोल भित्र लुकेर इमान्दारीताको शिकार गर्ने खेलहरु नभएका होईनन् ।
तर ति प्रयासहरु समयको चाल सँगै नागिंदै जाने क्रम पनि रोकिएको छैन । इमान्दारीता र स्वाभिमानको बर्तमान हारे पनि बिगत इतिहास बनेर हाम्रो अन्तरमनको गौरव बढाइरहनेछ । इतिहास देखि सड्यन्त्रले निम्ताएका घटनाहरुले बर्तमान पछुताइरहेको छ । इमान्दार र स्वाभिमानहरुले केहि पल हार देखिएतापनि न इमान्दारीता हारेको छ न त स्वाभिमान ढलेको नै छ ।
नेपाली जनता र देवनारायणहरु
सप्तरीको तिलाठीमा साउन १३ गते एउटा घटना भयो । जहाँ भारतले नेपालको करिब १२ गाविस डुवानमा पार्नेगरि लगाएको तटबन्ध भत्काउने नेतृत्व सत्यनारायण यादवले गरे ।
उनको शरीरभर भारतीयहरुको कुटाइले छिया छिया परेको छ । देशको माटो बचाउनका लागि ज्यानकै बाजी राख्ने सत्यनारायणहरुको स्वाभिमानको यतीबेला नेपाली जनताले नमन गरिरहेका छन् ।
अनि यतीनै बेला राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि नेपाली जनता जागरुक भैरहेका छन् । देशको नेतृत्व गर्ने नेताहरुको लाचारीका कारण सत्यनारायण र सत्यनारायणहरुजस्ता स्वाभिमानी नेपालीहरुको स्वाभिमानमा आँच आउने प्रयत्न भैरहेको छ ।